Soomaaliga Trump ka mamnuucay magaaladiisa oo haddana aad u dalacay | SalaxleyTV
Ka dib toddobaadyo olola doorashada Yurub ah ayaa inta badan siyaasiyiinta waxay qaateen nasiino ka dib markii doorashada la soo gabagabeeyay.
Balse Maajid Maajid oo 29 jir qaxooti soomaliya ah, wuxuu sii waday kulamada uu bulshada la yeelanayo. Wuxuuna ugu dambeyn ku guuleystay inuu xubin ka noqdo baarlamaanka midowga Yurub.
Waxay arrintan ahayd taariikh cusub oo uu mar kale dhigay. Waxa uu markii hore noqday Soomaaligii ugu horreeyay ee duq magaalo ka noqda Sheffield.
Lahaanshaha sawirkaFAMILY PHOTO
Wiil yar oo lagu dilay magaalada London
Wiil allifay Koronto xarig la’aan shaqeyneysa